DAAWO:- CCWarsame shir jaraa’id qabtay “Xasan Daahir isagoo xanuunsan baa la kiciyay oo Kaniini la siiyay, si uu Gaal iigu xukumo, NISA ayaana ka dambaysay”. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Gudoomiyaha Xisbiga WADAJIR Siyaasi Cabdiraxmaan Cabshakuur Waersame oo galabta Shir Jaraa’id ku qabtay Magaalada Nairobi ayaa ka hadlay laba Arin oo kala ah “Inuu Shacabka usharaxo Hadalkiisii hore ee lagu haysto, iyo Inuu Cambeereeyo Duulaanka ay kusoo qaadeen wax uu ugu yeray Argagaxiso, Culimaa’usuu iyo Dowladda oo wada socda”.
Siyaasiga ayaa ugu Horreyn si faahfaahsan uqeexay Xadiithkii kujiray Khudbadiisii Jarmalka oo qaar kamid ah Culimadu ay ku dhaliileen, waxaana uu Arintaasi Gudoomiyaha soo hadal qaaday mar uu qeexayay Liiditaanka lagu hayo Haweenka Somaliyeed, isagoona soo daliishaday Axaadiith iyo Aayado Qur;aan.
Qodobka labaad ee Shirkiisa Jaraa’id ayaa kusaabsan inuu ujawaabo Hadalo kasoo yeeray Dad uu ukala saaray Argagaxiso oo uu ula jeedo Xasan Daahir Aways iyo Culumo uu sheegay in ay Dowladda Muyshaar siiso oo afka Dowladda kuhadla, waxaana hadalada Kooxahaasi uu kutilmaamay mid ay soo abaabushay Dowladda Somalia maadaama isaga ay isku hayaan Arimo kusaabsan Siyaasadda dalka.
CC Shakuur Warsame: Dowladu Argagixiso iyo Culumo ay Mushaar siiso ayey ii Adeegsatay si Dhiigeyga loo baneysto.
Posted by Universal Somali TV on Thursday, December 5, 2019
Previous articleDAAWO:- Gudoomiyaha Gobolka Bari oo udhaartay Nabadoonada Mucaaradsan Deni “Walaahi idiin ka yeeli mayno waxaad wadaan”.
Next articleYuusuf Garaad oo difaacay CCWarsame “Sheikh waxaan u aqaan Nabadoon dadka isku wada”.